Hisy Pentekôsta indray
"Ary izy sy ny manodidina ny havoanako dia hataoko fitahiana, ary hampilatsaka ranonorana amin'ny fotoany Aho, dia ranonoram-pitahiana mivatravatra." - Ezek. 34:26.
Ny endriky ny ranonorana aloha sy aoriana, izay milatsaka any atsinanana amin'ny fotoana famafazana sy ny fijinjana, no nentin'ny mpaminany hebreo nanambara mialoha ny firotsahan'ny fahasoavana ara-panahy amin'ny fatra mahagaga eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ny firotsahan'ny Fanahy tamin'ny andron'ny Apôstôly no fiantombohan'ny ranonorana aloha, na voalohany ary be voninahitra ny vokatr'izany. (...) Nefa rehefa akaiky ny fiafaran'ny fijinjana ny tany, dia hisy fanomezana manokana ny fahasoavana ara-panahy nampanantenaina, izay hanomana ny fiangonana ho amin'ny fiavian'ny Zanak'olona. Ampitovina amin'ny filatsaky ny ranonorana aoriana io firotsahan'ny Fanahy io.- VM, t. 49.
Ny asa lehibe fitoriana ny filazantsara dia tsy hifarana amin'ny fanehoana ny herin'Andriamanitra latsa-danja noho izay hita teo amin'ny fiantombohany. Ireo faminaniana izay tanteraka tamin'ny firotsahan'ny ranonorana voalohany tamin'ny fiandohan'ny fitoriana ny filazantsara dia ho tanteraka indray amin'ny fiafaran'izany amin'ny ranonorana farany. (...)
Hidodododo hatraiza hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary ny tavany hazava sy hamirapiratra noho ny fanokanan-tena masina. An'arivony ny feo manerana ny tany, izay hitondra ny hafatra fampitandremana. Hisy fahagagana hatao, hositranina ny marary, ary hisy famantarana sy zava-mahazendana hanaraka ny mpino. Hanao fahagagana mamitaka koa i Satana, ary hampidina afo avy any an-danitra mihitsy eo imason'ny olona izy (Apôk. 13:13). Amin'izany dia hisafidy izay hombany ny mponina eto an-tany.
Tsy fonjan-kevitra loatra fa fandresen-dahatra avy amin'ny Fanahin'Andriamanitra no hitohana ny hafatra. Efa naseho ny fonjan-kevitra. Efa nafafy ny voa, ary hitsiry izy izao ka hahavokatra. (...) Ankehitriny kosa dia tafiditra hatraiza hatraiza ny tara-pahazavana, hita mibaribary ny fahamarinana, ka manapaka ny fatorana nihazona azy ny zanak'Andriamanitra tso-po. Ny rohim-pianakaviana, ny fifandraisana eo amin'ny fiangonana, dia tsy manan-kery hitana azy izao. Sarobidy noho ny zavatra hafa rehetra ny fahamarinana. Na dia eo aza ireo fiasana miara-mioko hanohitra ny fahamarinana dia maro no hiandany amin'i Jehôvah.- HM, tt. 637,638.